Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.3 ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွဲပြားခြားနားသည်
အ Analog စအသက်အရွယ်အများစုသည်လူမှုရေးသုတေသနတစ်ဦးသင့်လျော်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာလုပ်ကြံလေ၏။ ဥပမာအားဖြင့်, စုပေါင်း 100,000 ကျော်ကလူပတ်သက်ကြောင်းဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်, Plott (2013) တစ်ဦးတည်းသာဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်ကြောင့်စီးပွားရေးဂိမ်းထဲမှာပိုက်ဆံဆုံးရှုံးစိတ်ဆိုးဖွစျလာသူကျောင်းသားတစ်ဦးကိုတွေ့။ , ယခင်သုံးဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ဥပမာသရုပျဖျောထားသကဲ့သို့, သို့သော်, သုတေသီများယခုလွန်ခဲ့သည့်အတွက်သူတို့အားတို့မှကွဲပြားခြားနားကြောင်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဤသုံးပါးလေ့လာမှုများမှ Generalizing ငါကောင်းကောင်းအဓိပ္ပာယ်သုတေသီများရင်ဆိုင်ရသောအဓိကပြဿနာစွမ်းရည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ကြောင်းကြောင်းထင်တယ်။ ပိုများသောအထူးသသုတေသီများက-မကြာခဏကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများ-ရှိသည်အတိတ်ကထက်သင်တန်းသားများကိုကျော်ပိုပြီးတန်ခိုးနှင့် ပူးပေါင်း. ။ တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ငါရိုးရိုးလေးသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ပင်အသိမပါဘဲလူအားအမှုတို့ကိုပြုနိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုတာ။ ငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့အရာတို့ကိုသူတို့၏အပြုအမူလေ့လာသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ချက်မှာသူတို့ကိုမအပ်နှံဖြစ်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စောင့်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမှသုတေသီများ၏တန်ခိုးတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ, ထိုအာဏာကိုအသုံးပြုသင့်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်ညီမျှတိုးမရှိ။ တကယ်တော့သုတေသီများကိုက်ညီမှုမရှိနှင့်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့အာဏာကိုကငျြ့သုံးဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, ဒီအများဆုံးဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သုတေသနလုပ်ငန်းသိက္ခာမဲ့ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့ဒီအခြေအနေကိုအားပေး, ငါသုတေသီများသိသိသာသာကောင်းသောတရားသဖြင့်စီရင်ပြသကြပြီထင်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မရေလမ်းညွှန်ချက်များပေါင်းစပ်သို့သော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာကောင်းကောင်းအဓိပ္ပာယ်သုတေသီများတတ်၏။
သငျသညျကိုယျတိုငျကိုကသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အသိပညာမပါဘဲလူကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနိုင်စွမ်း-ရှိအစိုးရများကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ပိုမိုသုတေသီများ-မကြာခဏ, လူတွေမှအမှုတို့ကိုပြုရန်သင့်စွမ်းရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်မခံစားရပေမဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်, ပတ်ပတ်လည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အောက်ပါသူတို့သည်လည်းလုပျသမြှကိုမှတ်တမ်းတင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီခြေရာခံနိုင်တဲ့သူတို့စကားပြောသောသူတို့သည်မဝယ်အဘယျသို့ထိုကဲ့သို့သောသူတို့သွားရာအရပ်အဖြစ်အမှုအရာ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ဖတ်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အ Analog စခေတ်တွင်ဤကဲ့သို့သောလူစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကြီးမားဘတ်ဂျက်နှင့်အတူအစိုးရများ၏ပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အခုတော့ဒီသတင်းအချက်အလက်အားလုံးပုံမှန်အလိုအလျှောက်သန်းပေါင်းများစွာနှင့် ပတ်သက်. မကြာမီလူမျိုး၏ဘီလီယံဖြစ်မှတျတမျးတငျထားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဤအချက်အလက်များ၏အားလုံးသောကွောငျ့, ဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်ထားသောကြောင့် copy ရန်လွယ်ကူသည်, ရှာ, ထုတ်လွှင့်, ပေါင်းစည်းနှင့်ဘဏ္ဍာသည်။ တစ်နည်းတှငျအဘယျပုံမှန်ယနေ့ပြုသည့်ကေဂျီဘီ, စီအိုင်အေနှင့်ရှတာဇီနဲ့တူစစ်အေးတိုက်ပွဲထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများရှော့ခ်နှင့်အလွန်အံ့သြစေလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်, ဒီအမူအကျင့်ခြေရာခံခြင်းတာ surveilled လျက်ရှိသည်သောသူတို့၏အမျိုးအပြည့်အဝနားလည်မှုကိုမပါဘဲရာအရပျကိုယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်၏ဤအခွအေနအေဖမ်းယူသောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဥပစာကို panopticon ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအကျဉ်းထောင်တစ်ခုဗိသုကာအဖြစ်ဂျယ်ရမီ Bentham အားဖြင့် 18 ရာစုနှောင်းပိုင်းအတွက်အဆိုပြုထားခြင်း, panopticon စောင့်ကြည့်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်ထွန်းခြင်း (ပုံ 6.3) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ panopticon ဗဟိုကင်းမျှော်ပတ်ပတ်လည် oriented အခန်းပေါင်းနှင့်အတူတစ်မြို့ပတ်ရထားအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ အကြင်သူသည်ဤအကင်းမျှော်ယူထားသောအခန်းအတွက်လူအပေါငျးတို့၏အမူအကျင့်ကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ နှင့်အညီ, ဝေဖန်, အခန်းရှိလူကင်းမျှော်အတွက်လူတစ်ဦးကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျပါဘူး။ ကင်းမျှော်အတွက်လူတစ်ဦးဤသို့တစ်ဦးမမွငျရသောပရောဖက်သည် (Foucault 1995) ။
ပုံ 6.3: ပထမဦးဆုံးဂျယ်ရမီ Bentham အားဖြင့်အဆိုပြုထားအ panopticon အကျဉ်းထောင်ကနေဒီဇိုင်း, ။ အလယ်ဗဟိုမှာတော့လူတိုင်း၏အမူအကျင့်ကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျပွီးလေ့လာမရနိုငျတဲ့သူတစ်ဦးမမွငျရသောပရောဖက်လည်းရှိ၏။ : Willey Reveley, 1791. ရင်းမြစ်များက drawing Wikimedia Commons ။
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအမူအကျင့်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံဒစ်ဂျစ်တယ်စံချိန်တင်ထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်တကယ်တော့ဒစ်ဂျစ်တယ်စောင့်ကြည့် ပို. ပင်အစွန်းရောက်တစ်ဦးကင်းမျှော်အတွက်လူတစ်ဦးထက် (Mayer-Schönberger 2009) ။ သေးမရှိနေချိန်တွင်အားလုံးလူ့အပြုအမူတစ်ခုအပြည့်အဝမှတ်တမ်းတင်မှုအရာကြောင့်ဦးတည်ရွေ့လျားလျက်ရှိသည်, တစ်ဦးမာစတာဒေတာဘေ့စသို့ပေါင်းစည်း။ နှင့်အညီ, လှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံးဖွယ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအာရုံခံကိရိယာ၏စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်အဖြစ်ဆက်လက်လိမ့်မည်အကြောင်း, သိုလှောင်မှုပမာဏ၏ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချဖို့ဆက်လက်နှင့်, ငါတို့ဘဝတွေကိုပိုပြီးကွန်ပျူတာ-mediated ဖြစ်လာ။
များစွာသောလူမှုရေးသုတေသီများကဤသခင်သည်ဒေတာဘေ့စပိုင်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြည်စေခြင်းငှါ, နှင့်ဆက်ဆက်အရေးကြီးသောသုတေသနလုပ်ငန်းတွေအများကြီးအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ပျက်စီးခြင်း၏ဒေတာဘေ့စ: ဥပဒေရေးရာပညာရှင်များ, သို့သော်, ဒီမာစတာဒေတာဘေ့စတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောနာမတျောကိုပေးပြီ (Ohm 2010) ။ လူအခြို့သောပစ္စည်းများဖတ်သို့မဟုတ်အချို့သောအကြောင်းအရာများဆွေးနွေးရန်ဆန္ဒမရှိဖြစ်လာလျှင်ပင်မပြည့်စုံသောသခင်ကိုဒေတာဘေ့စ၏ဖန်ဆင်းခြင်းလူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဘဝအပေါ်တစ်ဦးသွေးအေးအကျိုးသက်ရောက်နိုင် (Schauer 1978; Penney 2016) ။ တဦးတည်းတနေ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရည်ရွယ်ချက်, အလယ်တန်း-အသုံးပြုမှုကိုခေါ်အခြေအနေမျိုးအတွက်အသုံးပြုရမည်ကြော်ငြာ-အစွမ်းသတ္တိကိုပစ်မှတ်ထားရည်ရွယ်ချက်-ဆိုဖန်တီးနေချိန်မှာမာစတာဒေတာဘေ့စတဲ့အန္တရာယ်လည်းရှိပါသည်။ မျှော်လင့်အလယ်တန်း-သုံးစွဲမှု၏တစ်ဦးကြောက်မက်ဖွယ်ဥပမာအားကြောင့်အစိုးရသန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်မာစတာဒေတာဘေ့စယုဒလူတို့ဆန့်ကျင်ရာအရပျကိုယူပြီးသောလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, ရိုးမားလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အသုံးပြုအချိန်ကုန်ခဲ့သည့်အခါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်နှင့်အခြားသူများ (ဇယား 6.1) (Seltzer and Anderson 2008) ။ ငြိမ်းချမ်းသောကြိမ်အတွင်းဒေတာစုဆောင်းသူစာရင်းအင်းပညာရှင်များနီးပါးဆက်ဆက်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နာဇီဂျာမနီမှာအာဏာရလာကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောအခါ-ပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်-ဒီဒေတာကိုတစ်ဦးအလယ်တန်း-အသုံးပြုမှု enabled သောအခါရည်ရွယ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ မာစတာဒေတာဘေ့စတည်ရှိပြီးတာနဲ့အဲဒါကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုလိမ့်မည်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်မျှော်လင့်ရန်ခက်ခဲသည်။
စားပွဲတင် 6.1: လူဦးရေဒေတာစနစ်များပါဝင်ပတ်သက်သို့မဟုတ်အလားအလာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြဘယ်မှာမှုများ။ ဒီစားပွဲအားဖြင့်ပြုစုမူရင်းခဲ့ Seltzer and Anderson (2008) , ငါက၎င်း၏ကော်လံ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပါဝင်ကြပြီ။ ကြည့်ရှုပါ Seltzer and Anderson (2008) အသီးအသီးအမှုနှင့်ပါဝင်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကသည်။ မျှော်လင့်အလယ်တန်းအသုံးပါဝင်ပတ်သက်သည်ဤအမှု၏အချို့, သို့သော်အားလုံးမဟုတ်။
သြစတြေးလျ 19 & 20 ရာစုအစောပိုင်း တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ့အင်အားမှတ်ပုံတင်ရေး လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၏အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, ဒြပ်စင်
တရုတ်နိုင်ငံ 1966-76 ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမကောင်းတဲ့-class ကိုဇာစ်မြစ် ပြည်သူ့အင်အားမှတ်ပုံတင်ရေး အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုလူအုပ်စုအကြမ်းဖက်မှုများ
ပြင်သစ် 1940-44 ယုဒလူတို့ ပြည်သူ့အင်အားမှတ်ပုံတင်ရေး, အထူးသနျးခေါငျစာရငျး အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ဂျာမနီ 1933-45 ယုဒလူတို့, ရိုးမားနှင့်အခြား များပြားသော အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ဟန်ဂေရီ 1945-46 ဂျာမန်နိုင်ငံသားများနှင့်ဂျာမန်မိခင်ဘာသာစကားသတင်းပို့သူတို့အား 1941 ပြည်သူ့အင်အားသန်းခေါင်စာရင်း အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်း
နယ်သာလန် 1940-44 ယုဒလူနှင့်ရိုးမား ပြည်သူ့အင်အားမှတ်ပုံတင်ရေးစနစ်များ အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
နော်ဝေ 1845-1930 Sami နှင့် Kven ပြည်သူ့အင်အားသနျးခေါငျစာရငျး တိုင်းရင်းသားရေးရာစင်ကြယ်
နော်ဝေ 1942-44 ယုဒလူတို့ အထူးသန်းခေါင်စာရင်း & အဆိုပြုထားသည့်လူဦးရေမှတ်ပုံတင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ပိုလန် 1939-43 ယုဒလူတို့ အဓိကအားဖြင့်အထူးသနျးခေါငျစာရငျး လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ရိုမေးနီးယား 1941-43 ယုဒလူနှင့်ရိုးမား 1941 ပြည်သူ့အင်အားသန်းခေါင်စာရင်း အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
ရဝမ်ဒါ 1994 စီ ပြည်သူ့အင်အားမှတ်ပုံတင်ရေး လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု
တောင်အာဖရိက 1950-93 အာဖရိကနှင့် "color" popualtions 1951 ခုနှစ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း & လူဦးရေမှတ်ပုံတင် အသားအရောင်ခွဲခြားရေး, မဲဆန္ဒရှင် disenfranchisement
ယူနိုက်တက်စတိတ် 19 ရာစု native အမေရိကန်တွေ အထူးသနျးခေါငျစာရငျး, လူဦးရေမှတ်ပုံတင် အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်း
ယူနိုက်တက်စတိတ် 1917 သံသယဖြစ်ဖွယ်ဥပဒေကြမ်းချိုးဖောက် 1910 သန်းခေါင်စာရင်း မှတ်ပုံတင်ရှောင်ရှားသူတို့၏အမျိုးအစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး & တရားစွဲဆိုမှု
ယူနိုက်တက်စတိတ် 1941-45 ဂျပန်အမေရိကန်တွေ 1940 သန်းခေါင်စာရင်း အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်း & အကျယ်ချုပ်
ယူနိုက်တက်စတိတ် 2001-08 သံသယဖြစ်ဖွယ်အကြမ်းဖက်သမားများ NCES စစ်တမ်းများ & အုပ်ချုပ်ရေးဒေတာ ပြည်တွင်း & အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်သမားများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး & တရားစွဲဆိုမှု
ယူနိုက်တက်စတိတ် 2003 အာရပ်-အမေရိကန်တွေ 2000 ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်း အမည်မသိ
ရုရှားနိုင်ငံ 1919-39 လူနည်းစုလူဦးရေ အမျိုးမျိုးသောလူဦးရေသနျးခေါငျစာရငျး အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, အခြားလေးနက်သောပြစ်မှုများ၏ပြစ်ဒဏ်
သာမန်လူမှုရေးသုတေသီများကသိပ်ကိုဝေးလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်သွေးအေးသက်ရောက်မှုများဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်း-အသုံးပြုမှုအားဖြင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာပါဝင်ပြိုင်ပွဲဝင်တူဘာမှမှဖြစ်ကြသည်။ ငါသူတို့လူမှုရေးသုတေသီများကအချို့သောလူတို့သည်မိမိတို့အလုပ်မြင်ရကြလိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်မှန်ဘီလူးနားလည်ကူညီပေးပါမည်ထင်သောကွောငျ့, ဒါပေမဲ့, အဲဒီသည့်အကြောင်းအရာများဆွေးနွေးရန်ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ရဲ့စံနမူနာအဘို့, မြည်းစမ်း, ဆက်ဆံရေး, နှင့် Time စီမံကိန်းကိုထံသို့ပြန်လာကြကုန်အံ့။ အတူတူဟားဗတ်ကနေပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် granular ဒေတာနှင့်အတူ Facebook ကမှပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် granular ဒေတာပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်, သုတေသီလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျောင်းသားများ၏အသက်တစ်အံ့သြလောက်အောင်ကြွယ်ဝသောအမြင်နေသူများကဖန်တီး (Lewis et al. 2008) ။ များစွာသောလူမှုရေးသုတေသီများမှကောင်းမွန်သောဤအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်မာစတာဒေတာဘေ့စတူပုံရသည်။ သို့သော်အချို့သောအခြားသူများကသင်တန်းသားများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖန်တီးခဲ့ကြောင်းပျက်စီးခြင်း၏ဒေတာဘေ့စရဲ့အစနဲ့တူလှပါတယ်။ အဆိုပါမြည်းစမ်း, ဆက်ဆံရေး, နှင့် Time စီမံကိန်းကို 2006 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သုတေသီများခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂလိကမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်သင်ရှေ့ကိုနည်းနည်းကြည့်ရှုလျှင်သင်သည်ဤပြဿနာများကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးရဖို့များပါတယ်ကြောင်းစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ သုတေသီများ 2026 ခုနှစ်အထိနိုင်ငံတကာသို့မဟုတ် 2046 ခုနှစ်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ပတ်သက်. တည်ဆောက်နိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ် mosaic အဘယျသို့သောဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်ဖို့အပြင်, သုတေသီများ-နောက်တဖန်ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ပိုမိုစနစ်တကျ randomized ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်လူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာ၌်ရောက်စွက်ဖက်အစိုးရများ-နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်အတွက်, သုတေသီသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အသိပညာမပါဘဲစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက် 700,000 လူစာရင်းသွင်း။ ငါအခန်း5(စမ်းသပ်ချက် Running) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း,, စမ်းသပ်ချက်သို့တက်ရောက်လာသူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်စစ်မှုထမ်းဒီလိုမျိုးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ်ကကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ငါအခန်း5မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, သုတေသီများတိုးသုည variable ကိုကုန်ကျစရိတ်, အလွန်ကြီးမားတဲ့စမ်းသပ်ချက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ စောငျ့ရှောကျဖို့စွမ်းရည်လိုပဲစနစ်တကျထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနိုင်စွမ်းဖွယ်ရှိကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတိုးမြှင့်အာဏာရဲ့မျက်နှာ၌, သုတေသီများ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီမှုမရှိနှင့်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒီမကိုက်ညီတစ်ခုမှာအရင်းအမြစ်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များ၏စွမ်းရည်များပိုမိုလျင်မြန်စွာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းထက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ, အဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေ (United States မှာအများဆုံးအစိုးရရန်ပုံငွေသုတေသနလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်စ​​ည်းမျဉ်းများအစု) 1981 ကတည်းကနည်းနည်းပြောင်းလဲခဲ့သည့်အဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေကိုခေတ်မီဖို့တစ်အားထုတ်မှုကို 2011 ခုနှစ်စတင်ပေမယ့်တစ်ဦးကဒုတိယ 2016 ၏နွေရာသီ၏အဖြစ်မပြည့်စုံခဲ့ မကိုက်ညီ၏အရင်းအမြစ် privacy ကိုတူစိတ္တဇသဘောတရားများကိုပတ်လည်မှာစံချိန်စံညွှန်းနေဆဲတက်ကြွစွာသုတေသီများ, မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကအခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဒေသများအတွက်အထူးကုယူနီဖောင်းများသဘောတူညီမှုမရောက်ရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ပင်ကိုယ်မူလသုတေသီများသို့မဟုတ်သင်တန်းသားများကိုလည်းကောင်းသဘောတူရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်သင့်သည်။ မကိုက်ညီ၏နောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သုတေသနလုပ်ငန်း ပို. ပို. အလားအလာထပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှဦးဆောင်သောအခြားအခင်းအကျင်းသို့ရောနှောကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက် Facebook ကမှာဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ကော်နဲလ်ပါမောက္ခတစ်ဦးနှင့်ဘွဲ့ရကျောင်းသားအကြားတစ်ဦးပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Facebook ကကြီးမားတဲ့စမ်းသပ်ချက်အပြေးမှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာသူတို့ဝန်ဆောင်မှု၏ Facebook ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏, ထိုကာလအခါ, စမ်းသပ်ချက်မရှိ Third-party ပြန်လည်သုံးသပ်ရှိ၏။ ကော်နဲလ်မှာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတော်လေးကွာခြားပါ၏ လုံးဝနီးပါးအားလုံးစမ်းသပ်ချက်အကော်နဲလ် IRB အားဖြင့်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့သောစည်းမျဉ်းများအစုစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်-Facebook ရဲ့သို့မဟုတ်ကော်နဲလ်ရဲ့အုပ်ချုပ်သင့်သနည်း အဲဒီမှာကိုက်ညီမှုမရှိနှင့်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေတွေ, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စံချိန်စံညွှန်းတောင်သုတေသီများဒုက္ခညာဘက်အရာလုပ်နေစေခြင်းငှါကောင်းစွာအဓိပ္ပာယ်အခါ။ တကယ်တော့ကြောင့်မကိုက်ညီ၏, ပင်တစ်ခုတည်းညာဘက်အရာမျှမရှိစေခြင်းငှါ, ။
ယေဘုယျအားဤနှစ်ဦးအင်္ဂါရပ်တွေ-တိုးမြှင့်တန်ခိုးနှင့်အာဏာဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သုတေသီများအနာဂါတ်ကာလတွင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖို့သွားကြသည်အသုံးပြု-သာမညဖြစ်သင့်ပုံကိုအကြောင်းသဘောတူညီချက်မရှိခြင်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသုတေသီများခြစ်ရာကနေစတင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, သုတေသီများ, ယခင်ကဖွံ့ဖြိုးပြီးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများနှင့်မူဘောင်အနေဖြင့်လာမည့်နှစ်ဦးပုဒ်မ၏အကြောင်းအရာများသည်ပညာကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်။